Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo maanta ku wajahan Afgooye – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo maanta ku wajahan Afgooye
Wafdiga uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ku jiri doonna wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo ammaanka guud ee wadada isku xirta magaalada Muqdisho illaa Afgooye si weyn loo adkeeyay.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa lagu daadiyay wadada isku xirta magaalada Muqdisho illaa Afgooye, iyagoona gebi ahaan xiray isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo wadadaasi ka jirtay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu tago degmada Afgooye wuxuu halkaasi kula hadli doonnaa shacabka ku dhaqan degmadaasi, wuxuuna sidoo kale kormeer ku taggi doonna xeryaha ciidanka, sida xerada laanta buure ee gobolka Sh/hoose.
Arrimaha ugu weyn ee madaxweyne Farmaajo u tagaayo degmada Afgooye ayaa ah ka warqabka xaaladda shacabka iyo ciidamada ku dhaqan degmadaasi, halkaas oo dhibaato xoogan ay ku haayaan kooxda Alshabaab oo marar badan weeraro halkaasi ku soo qaaday.